နညျးပညာ အစီအစဥျ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home အစီအစဉျမြား နညျးပညာ အစီအစဥျ
Rolls Royce ကုမ္ပဏီက ကားမော်ဒယ်အသစ်ကို အွန်လိုင်းမှာ ဖြန့်ဝေ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးသေးငယ်တဲ့ microsatellite ကို ဂျပန်နိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းတီထွင်
Discover Magazine ရဲ့ အင်တာနက် ၀က်ဆိုက်လ်မိတ်ဆက်
သြစတြေးလျနိုင်ငံက ရထားပေါ်မှာ ဂရက်ဖတ်တီ ရေးဆွဲတာကို အဆင့်မြင့်နည်းပညာနဲ့ ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစား
Facebook လူမှုကွန်ရက်ဟာ ဗီဒီယိုကြည့်ရတာကြိုက်တဲ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လေးတွေအတွက် Application အသစ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီ Application ဟာ iPhone အတွက်ပဲ သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး ကျောင်းသားအရွယ်လူငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Application ကို Install လုပ်ထားရင် ကိုယ့် Facebook သူငယ်ချင်းတွေရဲ့...
သိပံ္ပနဲ့ နည်းပညာအစီအစဉ် အမှတ်စဉ် (၁၃၇)
//cdn.playwire.com/bolt/js/zeus/embed.js မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားက MRTV က အပတ်စဉ် စီစဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာအစီအစဉ်က ကြိုဆိုပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကမ္ဘာမှာအသစ်ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်နေတဲ့ သိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၁။	Samsung နည်းပညာကုမ္ပဏီထုတ် Notebook9Laptop computer အကြောင်း ၂။ LG နည်းပညာကုမ္ပဏီထုတ် LG K10...
မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် (Drone) ကို လေယာဉ်နဲ့ ဟယ်လီကော့ပတာနည်းပညာတို့ကိုပူးပေါင်းပြီးတီထွင်
Belgium နိုင်ငံက မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် (Drone) ကို လေယာဉ်နဲ့ ဟယ်လီကော့ပတာနည်းပညာတို့ကိုပူးပေါင်းပြီးတီထွင်ထားတဲ့ သတင်းကို အခုလို ရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ဂျီးယားနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေဟာ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ကို ပိုပြီးအသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်
နိုင်ဂျီးယားနိုင်ငံက ကျောင်းသားတွေဟာ အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ကို ပိုပြီးအသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး လျှပ်စစ်ကားထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကို အခုလိုရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗြိတိန်တွင် wearable device တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်
အားကစားသမားတွေ အတွက် wearable device တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အကြောင်းကိုလည်း နိုင်ငံတကာနည်းပ ညာသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အခုလိုတွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=JZAbtjBc20c
Alphabet ကုမ္ပဏီက နေစွမ်းအင်သုံးမိုးပျံပူဖောင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်
Google ကုမ္ပဏီခွဲ Alphabet ကုမ္ပဏီက အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံမှာ နေစွမ်းအင်သုံးမိုးပျံပူဖောင်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက် ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်မယ့် သတင်းကို အခုလိုရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကနေ ဟာရီကိန်း Patricia ပက်ထရစ်ရှာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေထုတ်ပြန်
နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းကနေ ဟာရီကိန်း Patricia ပက်ထရစ်ရှာကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကို နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံသတင်းတစ်ပုဒ်မှာ အခုလိုရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
XOLO Era လက်ကိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်
XOLO နည်းပညာ ကုမ္ပဏီက နောက်ဆုံးထုတ် XOLO Era လက်ကိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းအကြောင်းကိုလည်း မိတ်ဆက်အနေနဲ့ တင်ပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက် ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ မိုက်ခရိုဆောဖ့်
နိုင်ငံတကာသိပ္ပံနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ရီးယဲလ်မက်ဒရစ်အသင်းအတွက် ဒီဂျစ်တယ် နည်းပညာတစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ မိုက်ခရိုဆောဖ့် ဆိုတဲ့သတင်းကို အခုလိုရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ https://www.youtube.com/watch?v=Z7WoICMxlRw
အလင်းနှစ်သန်းပေါင်း ၃၉ သန်း အဝေးမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာအရွယ် ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို တွေ့ရှိ
နက္ခတ်ဗေဒပညာရှင်တွေက အလင်းနှစ်သန်းပေါင်း ၃၉ သန်း အဝေးမှာရှိတဲ့ ကမ္ဘာအရွယ် ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို တွေ့ရှိခဲ့တဲ့သတင်းကို အခုလိုရှုစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မွနျမာအစိုးရနှငျ့ တပျမတျောကသာ နိုငျငံတကာ တရားစီရငျရေးအား စိနျချေါနဟေုဆို
ICC အရေးဟာ ပွညျတှငျး တရားစီရငျရေးအား စိနျချေါမှုလား ? အခြုပျအခွာအာဏာ ဆျောကားမှုလား ?
ရဲအခြုပျခနျးတှနေဲ့ အကဉျြးထောငျတှထေဲက ကိုဗဈ-၁၉ ကူးဆကျမှု အန်တရာယျ
၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ နိုငျငံတကာ နှုနျးစံတှကေို မမီနိုငျတဲ့ အဓိကအကွောငျးအရငျးတှကေ ဘာတှလေဲ ?